Posted by JuneOne at 12:53 AM
Anonymous December 14, 2012 at 1:00 AM
မေလင်းလင်းက စားခါနီးကို ရွေးသေးတာဗျ။ သူ့စိတ်တိုင်းကျမှ ကောက်ယူစားတာ။
JuneOne December 14, 2012 at 1:12 AM
တစ်ပန်ကန်းလုံး သူအကုန်စားတာပဲ။ဒါပေမယ့် ကောင်းတာလေးတွေ အရင်ရွေးစားတာ။အာလူးချောင်းပုံင်္စက နဲနဲ ပါးပီးမာမယ့်ပုံဆို ဖယ်ထားတာ မစားဘူး။နောက်ဆုံး မှ စားတယ်။
Anonymous December 14, 2012 at 1:18 AM
ရယ်လိုက်ရတ ၊ နေရာလုပေးတာဖတ်ပြီး
LOL....so cute and lovely.
Thandar Lwin December 14, 2012 at 9:39 AM
မေလင်းလင်း အကြောင်းတွေ များများရေးပါအေ့ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ။
like Edwin's style from Banner Photo.
so lovely maylin
phu wint December 14, 2012 at 10:40 AM
ဟဟားးး ချစ်စရာလေးပဲ အမရေ .. ညီမဘေးမှာသာရှိရင် ပါးကိုလိမ်ဆွဲမိမယ်ထင်တယ် စားနေတဲ့ပုံလေးကို
Rita December 14, 2012 at 3:05 PM
T T Sweet January 23, 2013 at 8:28 PM
ခလေးတွေ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဂျူဂျူးက ကြီးလာတော့ အဲလို လေးတွေ ရေးစရာမရှိတော့ဘူး။